Uhlu Lwama-imeyili Ozokwelapha | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu Lwama-imeyili Ozemithi
Ikheli Le-imeyili Lezokwelapha
Uhlu lwamakheli lwamuva nje lukuhlinzeka ngohlu lwe-imeyili olusha lwe-100%. Uhlu lwe-imeyili lufake lonke igama lokuxhumana laseMelika, ikheli, inombolo yocingo, ikheli le-imeyili, iwebhusayithi, inombolo yefekisi negama lenkampani njll. Uhlu lwe-imeyili Olumaphilisi lusebenza kakhulu, olunomdlandla, oluphendula ngokuqondile kanye namathemba aphelele wokunyuswa. Siyinkampani enikezela ngohlu lwe-imeyili ehamba phambili emhlabeni. Lolu hlu lwe-imeyili oluthengayo kusuka ku-datha yokuthumela i-imeyili entsha uLuhlu olunembe kakhulu uzothola. Lolu hlu iqoqo ledatha eliphelele elinamakhanda webhizinisi lezemithi ahlanzekile futhi aqondayo nemininingwane yokwenza izinqumo. Thenga lolu hlu lwe-imeyili namuhla futhi ungaluhlanganisa ku-CRM yakho bese uqalisa kungakapheli imizuzu. Lolu hlu lwe-imeyili luzokusiza ukuthi ulethe inkampani yakho.
Sizosiza ukwakha uhlu lwakho lwe-imeyili oluhlosiwe. Cishe sinamarekhodi we-209,000 b2b avela ku-Pharmaceutical. Ngakho-ke uma uthenga lolu hlu uzothola i-imeyili ye-imeyili ye-209,000 futhi negama lebhizinisi le-209,000 liphinde likhulume futhi nenombolo yefeksi futhi negama lokuxhumana. Manje-ke qala imikhankaso yakho ku-Pharmaceutical. Phezu kwayo yonke imininingwane yohlu lwe-imeyili.
Bona imininingwane eminingi:
Thenga Uhlu Lothintana Nemithi
Uhlu lwethu lokuposa lwamakhemisi ulungele izidingo zakho zebhizinisi kanye nohlu lwethu lwe-imeyili, uthola ukufinyelela olwazini olunembile kakhulu lokumaketha endaweni yemakethe nge-98% yokulethwa kwamanani.Uhlu lokugcina lwamakheli we-Mailing Database lwakamuva luyindawo yokuthengisa enhle kakhulu enikezela okubuyekeziwe kanye nolwazi oluqinisekisiwe lwe-imeyili yakho, iposi, noma imikhankaso yokuthumela izingcingo.
Senza ngokwezifiso i-Database Yemibhalo Esetshenziselwa Ukuphathwa Kwemithi ngokwezidingo zakho futhi sinikeza ama-imeyili atholakalayo aqonde kakhulu ku-imeyili, Imeyili kanye neTelemarketing ukukhulisa i-ROI yakho futhi sithuthukise ukuguqulwa.Uhlu Lwethu Lwama-imeyili Olimi nezinsizakalo.
Uhlu Lwama-imeyili Olwenziwo Lwama-Pharmacutical Executive Council kusuka ku-Mailing Database yakamuva ingakunika imininingwane yokuxhumana oyidingayo.I-Database Yeposi Yethunga Lokuthengisa Imithi ingakuxhumanisa nabenza izinqumo ezibalulekile, abaphathi nabasebenza ochwepheshe ongabheka nabo amathuba amasha ebhizinisi.
Inani Lamarekhodi: 209,000
Ikheli le-imeyili yemithi
Ingqikithi yezindleko: $ 3000 (imali yesikhathi esisodwa)
Uhlu Lwama-imeyili Ezemithi Imibuzo Nempendulo